को हुन् पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गोविन्द पोखरेल ? | karnalikhabar.com
को हुन् पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गोविन्द पोखरेल ? – karnalikhabar.com
को हुन् पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गोविन्द पोखरेल ?
प्रकाशित मिति :2017-01-11 13:26:59 काठमाडौ– सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओमा गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुशील ज्ञवालीलाई हटाएर पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो । पोखरेललाई नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा प्राधिकरणमा नियुक्त गरिएको हो ।
यसअघि सरकारले भुकम्पपछिको काम गराई सुस्त भएको भन्दै ज्ञवालीलाई दुई पटक स्पष्टिकरण सोधेको थियो । उनले दिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि हटाएको मन्त्रिपरिषद श्रोतले जनाएको छ ।
को हुन् गोविन्द पोखरेल ?
पोखरेल कांग्रेसका पराजित केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भएर काम गरेका छन् । पोखरेल योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाताहरुको सम्मेलन गरिएको थियो । नवनियुक्त पोखरेल प्युठानबासी हुन । यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले डा। पोख्रेललाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरे पनि सत्ता साझेदार दल एमाले र प्रमुख विपक्षी माओवादीले त्यससम्बन्धी विधेयक नै अगाडि बढाउन नदिएपछि औपचारिकता पाएको थिएन ।
ज्ञवाली एमालेका बफादार
हटाइएका ज्ञवालीको कमजोर निर्णय क्षमताले पुनर्निर्माणमा निकै ढिलाइ भएको सत्तापक्षको बुझाइ छ । उनी जुन दिन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त भए, उनलाई निकै कमले मात्रै चिनेका थिए । त्यसअघि उनी नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक थिए । ज्ञवाली सुरुदेखि नै एमालेका इमान्दार कार्यकर्ता भएको आरोप लागेकैले उनको नियुक्तिदेखि नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाउदै आएका थिए । जानकारहरुका अनुसार एमालेप्रति आवश्यकताभन्दा बढी नै लसपस गर्नु र प्राधिकरणमा अन्य दलहरुको विश्वास जुटाउन नसक्नु ज्ञवालीको कमजोरी हो ।